जसको विवाहले…..विश्वको ध्यान…..खिच्यो…! – Gorkhali Dainik
जसको विवाहले…..विश्वको ध्यान…..खिच्यो…!
October 5, 2020 198
विवाह तथा प्रेम गर्दा अहिलेको लागी उमेर एक जटील समस्याको रुपमा आइरहेको छ । तर, वास्तवमा प्रेम गर्नेहरुको लागी उमेर समस्याको विषय भने होइन ।
करन सिंह ग्रोभर जो आफ्नी पत्नी विपासा भन्दा २ वर्ष कान्छा छन् । उनीहरुको भेट सन् २०१५ को ‘एलोन’ नामक फिल्मको छायाङकनको क्रममा भेट भएको थियो । उनीहरुले सन् २०१६ मा विवाह गरेका थिए ।
बलिउड तथा हलिउड दुबैमा नाम कमाएकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले अमेरिकी कलाका निक जोनसँग गत वर्षमात्र विवाह गरिन् । त्यतिबेला उनीहरुको विश्वभर नै चर्चा चलेको थियो । निकको प्रियंका भन्दा १० वर्ष कान्छा छन् ।
केही समय आगडी उनीहरुको सम्बन्धको बारेमा केही टिकाटिप्पनी भएपनि अहिले उनीहरुको सम्बन्ध निक्कै राम्रो भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले बताएको छ ।
जोन लिनोन र योको ओनो, विटलस गायक जोन लिनोन उनकी पत्नी याको ओनो भन्दा सात वर्षले कान्छा छन् । यो जोडीको लगनगाँठो सन् १९६९ मा बाधेका थिए । योको र जोनबाट २ जना सन्तान छन् । दुखको कुरा यो जोडीको सन् १९८० मा हत्या भएको थियो ।
क्रिस मार्टीन र गेन्थ पाल्ट्र, कोल्ड प्ले गायक जो आफ्नी भुतपूर्व श्रीमती गेन्थ पाल्ट्र भन्दा ४ वर्षले साना छन् । यि दुइले सन् २००३ मा विवाह गरे । दुई सन्तान अभिभावक बनेका दुवै जनाले अहिले सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका छन् ।
सिरीस कुन्डरले आफुभन्दा आठ वर्ष जेठी युवतीसँग विवाह गर्दा उनको बलिउडमा नै चर्चा चलेको थियो । उनले चर्चित वलिउड कोरिओग्राफर तथा निर्माता फराह खानसँग विवाह गरेका थिए । यो २ जोडीले आजभन्दा १५ वर्ष अगाडी सन् २००४ मा विवाह बन्धनमा बाधिएका थिए ।
यी २ जोडीले विवाह गर्दै प्रेम गर्नलाई उमेरले कहिल्यै नछेक्ने प्रमाणित पनि गरिसकेका छन् । उनीहरुको हाल २ छोरी र १ छोरा छन् ।
एन्टोनियो ब्यान्डिर्स र मिलानी ग्रिफ्थ, हलीउड नायक एन्टोनियोले ग्रिफ्थसँग सन् १९९६ मा विवाह गरेका थिए । एन्टोनियो उनकी श्रीमती भन्दा ३ वर्षले साना हुन् ।
बेन एफ्लिक र जेन्नीफर गार्नर, हलीउड नायक बेन उनकी श्रीमती,जेन्नीफर मात्र चार महिनाले कान्छा छन् । उनीहरुले २००५ विवाह गरेका थिए ।
प्रमीत र अर्चना सन् १९९२ मा विवाह बन्धनमा बाधिएका थिए । प्रमीत अर्चना भन्दा ७ वर्षले कान्छा हुन् । उमेरमा ठुलो अन्तर भएपनि यो जोडीको ४ वर्ष सम्म प्रेम सम्बन्ध चलेको थियो । हाल उनीहरुको २ छोरा आर्यमन र आयूश्मान छन् ।
कुनाल केम्मु सोहा अली खानभन्दा ५ वर्षले कान्छा छन् । विवाह हुनु अगावै उनिहरुको सम्बन्ध प्रगाढ थियो । कुनाल र सोहाको अफेर चलेको ६ महिनापछि सन् २०१५ ९जनवरी २५ तारिखमा विवाह गरेका थिए । उनीहरुको अहिले एक छोरी छन् ।
आदित्य पन्चोली र जरिना वाहव । जरिना आदित्य भन्दा ५ वर्षले ठुली छिन् । यो जोडीको कलंकका टिका फिल्मको दौरानमा १९८६ सालमा भेट भएको थियो । लगतै उनीहरुले विवाह पनि गरे । हाल उनीहरुको छोरी साना र छोरा सुरज छन् ।
सैफ अली खान अमृता सिंहभन्दा १२ वर्षले ठूल िछिन् । अमृता सैफ अलीको भूतपूर्व श्रीमती हुन् । यो जोडी सन् १९९१ मा लगन गाँठोमा बाँधिएका थिए । त्यस्तै सन् २००४ मा यो जोडीले डिभोर्स गरेका थिए । सैफ अलि अहिले बलिउडकी अभिनेत्री करिना कपुरसँग विवाह गरेका छन् । जो सैफ भन्दा १०वर्ष सानी छिन् ।
फरा अख्तर र हधुना भवानी, यो दुई जोडीको भेट जव फराले ‘दिल चाहता है’ नामक चलचित्र को स्क्रिप्ट लेख्ने दौरानमा भएको थियो । फरा अधुना भन्दा ६ वर्षले साना छन् । यो जोडीले सन् २००० मा विवाह गरेका थिए । उनिहरुको अहिले २ छोरी छन् । बिडम्बना यो जोडीले अहिले सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका छन् ।
सुनील दत्त नर्गीस भन्दा १ वर्षले उमेर सानो छन् । उनीहरु ‘मदर इन्डिया’ नामक चलचित्रका दौरान भेट भएको थियो । सन् १९९७ मा चलचित्र सुटिङको क्रममा ठुलो आगलागी भएको थियो जहाँ दत्तले नर्गिसलाई आगोबाट बचाउन सफल भएका थिए ।
त्यसको १ वर्ष पछी यो जोडीले विवाह गरेका थिए । अहिले दत्त र नर्गिस ३ छोराछोरीको बुवा र आमा बनेका छन् । धनुस र ऐश्वर्या, रजनीकान्तकी छोरी ऐश्वर्या धनुस भन्दा एक वर्षले ठुली छिन् । यो यूगल जोडीले सन् २०१२ मा विहे गरेका थिए ।
अभिशेख बच्चन र ऐश्वर्या राय बच्चन , जुनियर बच्चन ऐश्वर्या भन्दा २ वर्षले साना छन् । यो जोडीले सन् २००७ मा विवाह गरेका थिए । उनीहरुको अहिले एक छोरी ‘आरध्या’ छन् ।
अर्जुन रामपाल र मेहर जेस्सा, प्रशिद्ध मोडेल तथा भूतपूर्व श्रीमती मेहर जेस्सा रामपाल भन्दा २ वर्ष जेठी छिन् । यो जोडीको औपचारीक सम्बन्ध सन् १९९८ मा गाँसिएको थियो । उनीहको दुई छोरी छन् । तर, यो जोडी अहिले सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका छन् ।
डेभिड वेहकम र भिक्टोरिया वेहकम, प्रशिद्ध फुटबलर डेभिड उनकी पत्नी भिक्टोरिया भन्दा एक वर्षले कान्छा छन् । यो जोडीले सन् १९९९ मा लगनगाँठो कसेका थिए । उनीहरुको अहिले चार सन्तान छन् । जसमा तीन छोरा र एक छोरी छन् ।
Prevरातिसम्म निन्द्रा लागेन भने यस्ता ११ उपायअपनाउनु….!
Next१९ करोड ५५ लाख बिगो बराबरको…‘गुण्डानाइके’‘बले’विरुद्ध….मुद्दा दायर…!
सासुले बुहारीलाई लमजुङमा…यस्तो के गरिन …? प्रहरीले लग्यो सासुलाई,अनि खुल्यो यस्तो रहस्य
कोरोना कहर कै बीच चर्चित लोक दोहोरी गायक राजु परियारले खोले एक करोड लगानीमा दोहोरी साझ (भिडियो हेर्नुहोस)